WOWOW 4 Intshi Isetha Isimpompi Segumbi Lokugeza Lesandla Esisodwa Ku-Chrome - Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Ikhaya / Amanzi okugeza / Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa / WOWOW 4 Inch Centerset Isibambo Sombhede Sokugeza Esingasodwa Esiku-Chrome
WowOW 4 Inch Centerset single-Handle Bathroom Faucet ku-Chrome
Ukusetha okulula: le faucet yokugeza yokugezela yenzelwe ukufanisa 3-hole, 4-in. Ukucushwa kwesizinda
Umhlangano we-drain ufakiwe: umhlangano we-pop-up ekugcineni wokuhlanganisa ufakwa ngesandla ukuqeda ukubukeka kwakho.
2320700C imiyalo yokufaka
Ipayipi lokugezela le-Chrome 2320700C
Isikhiphi sokugezela esenziwe kahle se-chrome yokugezela seWOWOW sinika ukubukeka okucwengekile endlini yakho yokugezela. Le faucet yokugezela ye-chrome yokugezela inomklamo wemfashini wefashini yasendulo. Izonikeza umthelela omangalisayo kwindlu yakho yokugezela, kunoma yiluphi uhlobo lwendawo ohlala kulo. Le faucet yokugezela i-chrome ingafakwa endlini yokuqasha, i-condo entsha, ifulethi elilodwa, ikhaya lezimoto, i-bungalow, i-trailer yokuhamba, noma ukwakhiwa kwendlu enkulu. Isikhiphi sokugezela esifakwe emphemeni we-chrome sinefenisha yokuqhafaza efana ne-chrome enikeza ukubukeka cishe kunoma iyiphi indlu yokugezela. Ukuqedwa kwe-chrome kubonakaliswa kakhulu ukukunikeza ukubukeka okubengezelayo okuhlanganisa kahle noma yisiphi isitayela sokugezela. Ngamajika aso agelezayo ingeza ukuthinta okudala futhi kwesimanje endlini yakho yokugezela.
Isikhiphi sokugezela esisodwa se-chrome yokugezela sinikeza indlela elula yokuhambisa isibambo emuva-naphezulu nangaphezulu-phansi nangaphansi ngokushelela. Ngale ndlela ungalawula umthamo wamanzi kanye lokushisa kalula ngesandla esisodwa. Kwenza kube lula ukuguqula kancane ukuhamba kwamanzi ngqo ngokwezidingo zakho ezithile. Uzomangala ngokuncipha kokugeleza kwamanzi kungalawulwa.
Izinto zekhwalithi ephezulu yokugezela ye-chrome yokugezela
Isikhiphi sendlu yokugezela ye-chrome yeWOWOW yakhiqizwa nge-zinc alloy, futhi yaqedwa ngesandla i-chrome eyenziwe ngombala futhi yathungwa. I-WOWOW isebenzisa ubuchwepheshe be-state-of-the-art ukuqinisekisa ubuhle obungaphelelwa isikhathi nokuqina kwaphakade. Isivalo se-ceramic ngokwesibonelo sinikeza ukusebenza okungahambi kahle ukuze kuhambe kahle. Ikhabethe lekhwalithi ephezulu ye-ceramic ngakolunye uhlangothi lidlulise isivivinyo ngemijikelezo yamanzi engaphezu kuka-500,000. Futhi isikebhe sokugeza se-chrome sasebenza kahle ngemuva kwazo zonke lezi zivivinyo. I-WOWOW ngenxa yalokho idlula wonke amazinga wokuphila isikhathi eside embonini ngokuya ngokuqina.
Ngaphandle kokuqina, kuhle futhi ukwazi ukuba namanzi ahlanzekile angahlanzekile ngaso sonke isikhathi. Ngenxa yezinsimbi ezinkulu ezisetshenziswayo, uzothola amanzi angaholi ngaso sonke isikhathi. Lokhu kuzovikela impilo yakho neyomndeni wakho unomphela. Ukuthuthukela kufenishi yokugezela ye-chrome yeWOWOW ngakho-ke ngeke kube yinto enhle yokugezela yakho kuphela, kuzoba ukukhetha okuhle futhi!
Isikhiphi sokugezela se-chset yokugezela
Isikhiphi sokugeza se-chset yokugeza ingafakwa kalula nguwe. Le faucet yokugezela ebekwe emphemeni we-chrome ilungele ukufakwa kwe-4 intshi 3-hole Centerset. Ibanga phakathi kwesikhuthu neziphathi li-4 inch. Ngazo zonke izesekeli nezinto zomhlangano le fa fagethi yokugezela ye-chrome iza ikulungele ukufakwa ngokwakho. Lokhu kufakwa kwe-DIY kuzokugcinela izindleko ezingezekile zepulamba elibizayo. Futhi akudingekile nhlobo. Ukuqanjwa kwayo okusha kwenza ukuthi i-novice ifake lesi isekeli lokugezela le-chrome ngemizuzu engama-20 kuphela. Ikhithi yokufaka iza negilavu ​​yokufakelwa yokuhambisana. Ngale ndlela ngeke ulimaze izandla zakho ngengozi lapho ufaka isikulufu sokugeza se-chrome. Sicela wazi ukuthi imigqa yokuhambisa ayifakwanga uma uyidinga, futhi ithengiswa ngokwahlukile.
Ukuphakama kwesihlakala sethanga lokugezela le-chrome lokugezela le-WOWOW ngamasentimitha angama-2.7 futhi ukufinyeleleka kwesipinashi kungamasentimitha angama-4.2 Isendlalelo esisodwa sokugeza esilingana silingana ukufakwa okujwayelekile okungama-4-intshi. Ngaphandle kwalokho, isikulufu sokugeza iklasikhi se-chrome ye-classic iza ne-pop up Stopper kufaka nenduku yokuhlanganisa ephakanyisiwe. Isikhiphi sokugezela se-chrome sihlangana kahle nomhlangano wokukhipha i-chrome. Kwakha ubunye obuvumelanayo echibini lakho lokugezela. Ungavumela kalula ukuthi amanzi aphele ngaphandle kwegumbi lokugezela ngokucindezela phansi induku yokuphakamisa. Ubungcono bokubamba induku yokuphakamisa, kukugwema ekulimazeni izandla zakho ngenkathi uzigeza. Idizayini yokudonsa yenzelwe ukwenza impilo yakho ibe nenhlanzeko futhi ilunge kakhudlwana.
Isikhiphi sendlu yokugezela ye-chrome yezomnotho
I-aerator entsha ye-ABS isindisa ngaphezu kuka-50% wamanzi. Ilawula ukugeleza kwamanzi ngokunikeza umfutho wokuphikisa kumfula wamanzi. Lokhu kuholela ekusungulweni kwamanzi anti-splatter, futhi kukusindise kakhulu kubili lakho lamanzi. Ngokuya ngendawo yakho, umthethosivivinywa wakho wamanzi ungeza kalula. Ngakho-ke kuhle ukwazi ukuthi ungonga izindleko zamanzi, ngaphandle kokulahlekelwa ngisho nokusebenza. Ngeke nje uqaphele umehluko njengoba isipiliyoni sakho samanzi sizothuthuka ngenxa yesici se-anti-splatter.
Ukusebenza okuphezulu kwe-Neoperl aerator kukuhlinzekela umuzwa wokugeza onethezekile. Ngokuthinta kancane ngeminwe yakho, ungasusa kalula yonke yonke insali yamanzi anzima njenge-calcium. Ngale ndlela ungagcina isikebhe sakho sokugezela se-chrome sisisha futhi sisebenza kahle. I-aerator yethenisi lokugezela le-chrome ingasuswa kalula ngezandla zakho. Awudingi noma yiliphi ithuluzi lokususa i-aerator njengoba ungasusa lesi sici esisha. Ungasusa i-aerator ukuze uyihlanze noma uyisuse esikhundleni sayo.
Isikhiphi sokugezela esingenabungozi segumbi lokugezela le-chrome
Ngenkathi yayo yesiqinisekiso seminyaka emi-3, i-WOWOW ikhombisa ukuzethemba kwayo kumbhobho wayo wokugezela we-chrome. Ngalesi sibani sompompi wokugezela osezingeni eliphezulu unenani elingcono lemali ongalithola emakethe. Izinto ezisezingeni eliphakeme aziphikiswa, futhi ngokwemali etshalwe imali inani liphansi ngangokunokwenzeka. Ngenxa yalokho, i-WOWOW iqinisekisa ukuthi ngeke uthole ipayipi lokugezela elisezingeni eliphakeme ngentengo efanayo. Futhi ngeke uluthole lolu hlobo lwompompi wokugezela osezingeni eliphakeme ngentengo ephansi. Ngenxa yekhwalithi ephezulu, i-WOWOW ayesabi ukukunikeza isikhathi sewaranti seminyaka emi-3. Ipayipi lakho lokugezela le-chrome lizothathelwa indawo elisha elisha sha uma lizolimala ngasizathu simbe.
Ungathenga ipayipi lokugezela le-chrome WOWOW ngaphandle kwengozi nhlobo. Uthola isiqinisekiso sokubuyisa imali sezinsuku ezingama-90. Uma ungeke waneliseka ngo-100% ngepompo yakho entsha yokugezela ye-WOWOW, uzothola imali egcwele. Ngaphandle kwemibuzo ebuziwe, kanjalo nje. Kepha siyaqiniseka ukuthi ngeke ubuyise ompompi bakho, njengoba sinamakhasimende amaningi anelisekile futhi abuyayo avela kuwo wonke umhlaba. Siyaqiniseka ukuthi uzoqiniseka ngenani lemali esikunikeza lona.
Ubuhle bephethini yokugezela ye-chrome ngefushane:
• Idizayina ekhanyayo ye-chrome
• Ukusebenza kahle
• Ngomklamo odonsayo wokudonsa induku
• Kwenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu ze-zinc alloy
I-SKU: 2320700C Categories: Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa, Amanzi okugeza Tags: 4 ye-intshi, Isandla esisodwa
I-NSF ceramic disc valve, xuba amanzi, i-3-hole 4 in. I-centeret design, kulula ukuyifaka, 1 isibambo sokulawula amanzi ashisayo namakhaza, i-chrome
I-WOWOW Soap Disapenser Commerce